Mac အခြေခံ - MYSTERY ZILLION
April 2010 edited April 2010 in Mac
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ မရှိပါဘူးဗျာ။ စသုံးကာစ GUI က windows နဲ့ မတူလို့ပြဿနာ နည်းနည်းရှိမှာလောက်ပဲရှိတယ်။ ၁ ရက်လောက်သုံးပြီးရင် အသားကျသွားတာပဲ။ လိုအပ်တဲ့ software တွေကတော့ google ကနေပဲရှာပေါ့။
မှာတော့ free software တွေအကြောင်းရေးထားတာ ရှိတယ်။
ကြုံဖူးဘူး တစ်သက်နဲ ့တစ်ကိုယ် မည်သို ့ပြောရမည်မသိ Mac အသုံးပြုနည်းအခြေခံလောက်သင်ပေးပါ့လား နည်းနည်းပါးပါး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လောက်ဆိုရပါဘီ
သင်ပေးပါနဲ ့တောင်နေသေးတယ် လေသတားကွန်တယ် လေသတား ဂွီဂွီဂွီ............
ေမးတဲ့ ေမးခွန်းရှင်ကို နားလည်ပါတယ်။ Mac အခြေခံက Mac မရှိဘဲနှင့်တော့ အထီးလား၊ အမလား၊ ရေသတ္တဝါလား၊ ကုန်သတ္တဝါလားဆိုတာလောက်ပဲ သိအောင်ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် Macရှိရင်တော့ အင်တာနက်မှာ ရှာရတာ လွယ်ပါတယ်။ နောက်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ Macအတွက် လမ်း​ညွန်ဆိုက်တွေလ​ဲ အတော်များလာပါပြီ။
windows osဘက်မှာ အခြေခံကောင်းခဲ့တယ် ဆိုရင် နှစ်ရက်လောက်နဲ့ အသားကျပြီး Macကို သုံးရတာ သဘောကျသွားတတ်ပါတယ်။ နောက်အလွယ်ကူဆုံးက အင်တာနက်မရှိလဲ သုံးဖူးတဲ့သူ တစ်ယောက်လောက်ကို Windowsနဲ့ ကွဲလွဲတဲ့နေရာလေးကို ပြောခိုင်းလိုက်ရင် တန်းသဘောပေါက်သွားတာပါပဲ။ လွယ်လွန်းလို့ ခက်နေတယ်ဆိုရာ Macကို ပြောတာပါ။
Macမှာက စစခြင်း စောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလို ဝင်းဒိုးရဲ့ Touchpad(ဝင်းဒိုးလက်တော့ပေါ်က မောက်အစားသုံးတဲ့နေရာ)နဲ့ မတူတာက TrackPadပါပဲ။ ဝင်းဒိုးသုံးလက်တော့မှာက Right Click, Left Clickပဲ သုံးနေကျဆိုတော့ အထာကျတယ်။ Macမှာက Right, Leftဆိုတာထက် လက်ညိုးတစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်း၊ သုံး​ေ​ချာင်း၊ လေးချောင်း စသဖြင့် ကွာသွားတာလေးတွေတော့ ရှိတယ်။ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ တစ်ခါလောက် မြင်ဘူးတာနဲ့ တစ်သက်လုံးမှတ်မိမဲ့ အရာတွေပါ။ နောက် Macရဲ့ TrackPadက ပုံသေအနေနဲ့ Tap to Click(ထိရုံနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နည်း)ကို မထားတတ်ဘူး။ မောက်ကို ဖိသလို ဖိလိုက်မှ(ခွပ်.....ကနဲ ကျွန်ဝင်သွားပြီးမှ) အလုပ်လုပ်တာပါ။ ဝင်းဒိုးမှာက အဲဒီစနစ်မရှိတော့ မဖိရဲဘူးပေါ့။ ကျွံဝင်သွားမှာ ကြောက်တာကိုး။ စစခြင်းဆိုတော့ ဖွင့်တောင် မဖွင့်တတ်ဆိုတာ အဲဒီလို ဝင်းဒိုးဘက်နဲ့ နည်းနည်းကွာနေလို့ပါ။ နားလည်သွားရင် ဝင်းဒိုးမောက်နဲ့ တူအောင် ထားလဲ ရပါတယ်။ ဝင်းဒိုးမှာက Shortcut, Macမှာက Aliasစသဖြင့် အခေါ်အဝေါ် ကွာသွားတာလေးတွေလဲ ရှိတယ်။ ဒါကတော့ အဘိဓာန်အားကိုးနဲ့ မိုက်လို့ရပါတယ်။ EtoEအဘိဓာန်က တခါတည်းပါပြီးသားပါ။ စေတန်တို့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်ကလဲ ထည့်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ Dictionary ဖိုဒါအောက်မှာ ကော်ပီကူးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
နောက် အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်မှာက Macအတွက် ဆော့ဖဝဲ။ ဒါကလဲ ဘာမှတော့ မခက်ပါဘူး။ ဒီဖိုရမ်မှာဆို Macရှိတဲ့လူတွေ အတော်များတယ်။ ​Mac​ေ​ဆာ့ဖဝဲက ဝင်းဒိုးဘက်မှာလို မဟုတ်ဘူး။ သူအင်စတောလုပ်ပြီးသား ဆော့ဖဝဲကို ကော်ပီးကူး ​Pastလုပ်လဲ ရတယ်။ (မရတာလဲ ရှိတယ်။) ဝင်းဒိုးဘက်မှာဆို ပရိုဂရမ်ဖိုင်အောက်က သူအင်စတောလုပ်ပြီးသား ပရိုဂရမ်ကို ကော်ပီးကူး ကိုယ့်စက်မှာ အင်စတောလုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ​Macမှာက အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ သူ့ ပရိုဂရမ် ဖိုဒါအောက်က(Application Folder)အောက်က သူအင်စတောလုပ်ပြီးသား ဆော့ဖဝဲကို ကိုယ့်စက်ထဲ ကော်ပီးကူးချလို့လဲ ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ မရတာလဲ ရှိသနော။ နောက် www.warez-bb.org, www.macbb.orgတို့မှာ ​Macအတွက် ဆော့ဖဝဲအကုန်နီးပါးရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆော့ဖဝဲအရောင်းဆိုင်တွေမှာလဲ အခုတော့ အတော်များများရနေပါပြီ။ (အရင်ကတော့ မရှိပါ။)
မပျင်းရင်တော့ ''မက်စ်ကွန်ပြူတာ ကကြီး၊ ခခွေး''ဆိုးပြီး ရေးပေးပါဦးမယ်။ စေတန်နဲ့ သူဖန်တီးထားတဲ့ ဆိုက်တွေရှိနေတာပဲဗျာ။ အသုံးမပြုတတ်မှာ စိုးရိမ်းစရာ မလိုဘူးထင်တာပဲ။ ကိုယ်စွမ်းနိုင်လောက်တဲ့ အခက်အခဲဆို Googling လုပ်ပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ မတန်တဲ့ အခက်အခဲဆို Saturngoding(ထိန်လင်းရွှေ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ) လုပ်ပေါ့။ ငါတော့ အဲဒီလိုနဲ့ အဖြစ်လေးလောက် သုံးတတ်လာတာပဲ။
@ saturngod ထိန်လင်းရွှေ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ (3) times .. teach me how to us Lion OSX :P ..
Sayardaw @masoeyein .. nice na maw tat sa ... ရန်ကုန်ဆော့ဖဝဲအရောင်းဆိုင်တွေမှာလဲ အခုတော့ အတော်များများရနေပါပြီ။ : no osx dvd pha yar .. If you are in YGN pls lend ( sont taw mu par ) me ..
mac မှာ ပါတဲ့ ကွန်ပြူတာ မြန်မာစာ လက်ကွက် ကို အရင် လေ့လာကြည့်ပါအုံး http://www.xenotypetech.com/help/keyboards/Burmese-QWERTY.pdf
အခြေခံဆို ရင် power အဖွင့် အပိတ် လုပ်တတ်ရင် အခြေခံတတ်ပြီ အဖွင့်အပိတ်က window နဲ့ အတူတူပဲ
sleep, restart, shutdown, log out အဲဒါတွေ window မှာဆိုရင် အောက်ဘက်မှာ ရှိပေမဲ့။ apple မှာတော့ အပေါ်မှာ ရောက်သွားပါတယ်။ အစကတော့ စက်ဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုသုံးရမယ် မသိဘူး။ ဘယ်လိုပိတ်ရမယ် မသိဘူး။ စက်ပိတ်မယ်ဆိုရင် shutdown ကိုရှာနှိပ်ပေါ့ဗျာ။ စက်ထဲမှာ ရှာမတွေရင် keyboardရဲ့ ပါဝါပုံ​ ညာဘက် အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင် သင့်ကို မေးခွန်း မေးပါလိမ့်မယ်။ restart လုပ်မှာလား sleep လုပ်မှာလား cancel shutdown လုပ်မှာလား / ရွေးလိုက်ရုံပဲ။
အင်တာနက်ကြည့်ရင်တော့ window မှာလို internet explorer အစား mac မှာက Safari ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
new tab လုပ်ချင်ရင် shortcut key က command + t
ပြီးရင် ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုက်ဒ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲ
သီးချင်းနားထောင်ရင်တော့ window မှာလို window media player ကနေ mac က itunes ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
copy လုပ်ချင်ရင် ctrl + c ကနေ command + c
paste လုပ်ချင်ရင် ctrl + v ကနေ command + v ပေါ့
window မှာ ctrl အစား mac က command ကို သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
new = command + n
save as = shift+ command + s
print = command + p
minimize = command + m
delete ကတော့ ကာစာရဲ့ အနောက်ကို မ​​ဖျက်ဘဲ အရှေ့ကဟာတွေကို ​ဖျက်သွားပါတယ်။
အ​နောက်ကို ဖျက်ချင်ရင်တော့ key fn + delete ကို တွဲနှိပ်ပေးရပါတယ်။
မတူတာက dock icon ပဲ။ app တွေကို အလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင် အောက်ဘက်မှာ လုပ်ပေးထားပါတယ်။
finder : Launchpad : app store : Mail : safari : FaceTime: address book : iCal ; Preview : iTunes : photoBooth : system Preferences : documents : downloads : Trash
လောလောဆယ် ဒီအထိပဲ လေ့လာကြည့်ပါ။
ကျန်တာကတော့ နောက်မှ ဆက်ရေးမယ်။
delete လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို ပြန်လိုချင်ရင် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ပြန်ယူတာတော့ အတူတူပါပဲ။ recycle bin
အမှိုက်ပုံးကိုတော့ Trash လိုခေါ်ပါတယ်။ ညာဘက်အောက်ဆုံးနားမှာ ရှိပါတယ်။ click နှိပ်ပြီ ဖွင့်လိုက်ပါ။
ဖျက်လိုက်​တဲ့ ဖိုင်တွေကို တွေပါလိမ့်မယ်။ ပြန်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို right click နှိပ် put back ဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်တာနဲ့ နဂိုဖျက်လိုက်တဲ့ နေရာကို ပြန်ရောက်နေတာ တွေရပါလိမ့်မယ်။
right click နှိပ်ဖို့ mouse မရှိတူတွေအတွက် shortcut key
လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ touchpad ကို နှိပ်ပါ။
control key + လက်တစ်ချောင်းတည်း touchpad ကို နှိပ်ပါ။
right click နှိပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကွန်ပြုတာ မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် log out အမြဲလုပ်ပေးပါ။
မလုပ်ခဲ့ရင် email တွေရော data တွေရော အကုန်ပါပြီ။ credit card သုံးတဲ့သူတွေ ပိုသတိထားရမယ်။ itune ထဲဝင်ပြီး အကုန်လျှောက်ဝယ်လိုက်ရင်။ မတွေရဲစရာပဲ။
ကျွန်တော် တစ်ခုသိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ window မှာဆို ကို့ IP ကြည့်ချင်ရင် CMD box ကနေ
IPCONFIG နဲ့ကြည့်ရသလိုမျိုး MAC မှာ ဘယ်လိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါသလဲဗျာ။
Run box ကိုမခေါတတ်ဖြစ်နေလို့ပါ။
ကျေးဇူးပြပြီး Shortcut key လေးပြောပြပေးပါလို့။
I don't have Mac but Mac is Unix. It could be the same command. You can try "ifconfig" command.
can go to Terminal and type ifconfig.
control + space bar in spotlight
type terminal and enter
type ipconfig getifaddr en0
mac မှာ log out, sleep, shut down လုပ်ပြီး စက်ပြန်ဖွင့် ရင် user password မလိုပဲ အလိုလို log in ဝင်နေတတ်တယ်။ လုံြခံုရေး သိပ်မကောင်းဘူး။ အဲဒါ setting ကို ပြောင်းတတ်ဖို့ လိုတယ်။ အရေးကြီးတယ်။ နောက်လူတစ်ယောက်က စက်ဖွင့်ပြီး သင့်​အကောင့်ကို သုံးလိုရလိမ့်မယ်။ သင့်စက်ကို တစ်ခြား password မသိသူ ဝင်မရအောင်
​apple ပုံကို​နှိပ်ပြီး system preferences သို့မဟုတ် dock icon မှာရှိတဲ့ system preferences ကို နှိပ်ပါ။
security & privacy icon ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် general tab ကို နှိပ်ပါ။
require password immediately after sleep or screen saver begins ကိုရွေးပါ။
for all accounts on this computer;
disable automatic login မှာ အမှန်ခြစ်လေလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
သင့် password ကိုတော့ နောက်တစ်ခါ ပြန်ဝင်ဖို့ မှတ်မိရန် လိုပါလိမ့်မယ်။